McCain utshale ama-ruble ayi-12 billion. ekukhiqizeni amafriji aseFrance esifundeni saseTula - umagazini i- "Potato System"
Isigungu sabaphathi bendawo ekhethekile yezomnotho "Uzlovaya" esifundeni saseTula sikwamukelile ukusetshenziswa kwe-LLC McCain Foods Rus ukuthola isikhundla sokuba ngumhlali, kusho abezindaba uhulumeni wesifunda.
Le nkampani, okuyinkampani ephethwe ngumholi womhlaba wonke ekukhiqizeni amafries aseFrance - inkampani McCain, uhlela ukubeka inkimbinkimbi yokuqamba amazambane e-Uzlovaya. Le phrojekthi ihlinzeka ngokutshala imali kwama ruble angaphezu kwezigidi eziyi-12 nokwakhiwa kwemisebenzi eyi-164.
Ngokusho kohlelo lwe-SPARK-Interfax, iMcCain Foods Rus yabhaliswa e-Uzlovaya ngoJuni 2020. Umsebenzi ophambili ukukhiqizwa kwemikhiqizo yokudla eseyenziwe ngomumo nezitsha, eminye imisebenzi ukucubungula nokulondolozwa kwamazambane, ukuhwebelana okuthe xaxa kweminye imikhiqizo yokudla engafakwanga kwamanye amaqembu, ukuhweba okuphelele okungagodliwe kwemikhiqizo yokudla efriziwe, ukugcinwa kanye nokugcinwa.
Abanikazi benkampani - McCain Ukudla Holland BV (99,99%) и McCain I-Europa BV (0,01%), i-CEO - u-Alexander Petrov.
McCain - umkhiqizi omkhulu kunazo zonke emhlabeni wamafries aseFrance, owasungulwa eCanada ngo-1957 ngumndeni wakwaMcCain, okwamanje uhlanganisa amafemu angaphezu kwama-50 eCanada, e-USA, e-Australia nase-European Union.
Tags: McCainUmkhiqizo wama-fries waseFranceIsifunda saseTula